Senza abesifazane umongo wokusungula amakhono kwezokwakha - Bayede News
Home » Senza abesifazane umongo wokusungula amakhono kwezokwakha
by nguSabelo Wasa
Ikusasa labantu besifazane embonini yokwakha lithole uxhaso olukhulu njengoba sekunesivumelwano phakathi kwenhlangano ethuthukisa amakhono kwezokwakha, iConstruction Sector Education and Training Authority (CETA) kanye nenhlangano emele abesifazane iSouth African Women in Construction (SAWIC). Lokhu kuvele ngesikhathi kunomhlanganobuchwepheshe obekudingidwa kuwo iqhinga lokwenza abesifazane umongo wokuthuthukiswa kwamakhono embonini yokwakha.
Lo mhlangano ubangelwe wukukhathazeka kweziphathimandla zeCETA kanye noNgqongoshe Wemfundo Ephakeme, Isayensi Nobuchwepheshe, uBonginkosi ‘Blade’ Nzimande mayelana nokugqoza kweqhaza elibanjwe abesifazane kule mboni. Njengasembonini yokumbiwa phansi, imboni yezokwakha iqhoqhobelwe ngamadoda njengoba abesifazane abasebenza kuyona bebalelwa kumaphesenti ali-11 kuphela. Yize amaphesenti angama-48 ezinkampani ezibhaliswe ohlwini lwezokwakha iConstruction Industry Development Board, kungezabesifazane, zingamaphesenti angama-95 kulezi zinkampani zibhalise ezigabeni ezisukela kwesokuqala kuya kwesesi-6. Ngokwalolu luhla kuya kunyuka isigaba kunyuka nemali yomsebenzi inkampani ekwazi ukuwufakela.
Imboni yokwakha ibaluleke kakhulu emnothweni wezwe njengoba kubalelwa ukuthi ngowezi-2018 yayifaka amaphesenti ali-14 kungeniso yezwe ebizwa ngokuthi yiGross Domestic Product (GDP). Njengoba izwe lizama ukuzikhipha enkingeni yokudodobala komnotho, kubalulekile ukuthi ligxile kulezo zimboni ezinomthelela omkhulu ekwakheni amathuba omsebenzi nokuthengwa kwempahla.
NgokoMphathi weCETA uMnu uSabelo Wasa, bahlose ukuthi inani labafundi bokwakha lingabi ngaphansi kwamaphesenti angama-50.
Ngokocwaningo olwenziwa yiWits University ngokwezi-2019, kubantu abayizi-3 325, abayizi 3 218 ababhalisile ngokusemthethweni njengabasebenza ngamakhono ezandla (artisans), bafisa iCETA ibasize ukubhalisa. Njengoba iCETA ivele inesivumelwano sobuhlobo neSAWIC, lesi sivumelwano sesishintshwe saba yileso sokuba abalingani abasebenzisanayo. Lokhu kusho ukuthi okwaqala njengobuhlobo sekudlulela esigabeni sokuba nemiphumela enqala njengoba kunezinto ezibambekayo ezizokwenziwa. Enye yizindlela iCETA ezihlonzile ukuqinisekisa ukuthi ukusebenza kwayo kungokuvelelekile, ukumema ezinye izinhlangano zabesifazane ukuthi zizoqapha ukusebenza kweCETA ikakhulukazi lowo msebenzi wokuletha ushintsho embonini yokwakha.
ICETA yethule nemikalo (scorecard) ukuze labo abaqaphe ukusebenza kwayo babe nento abamaka ngayo umsebenzi weCETA.
INkantolo Yezabasebenzi namazwi ahlakaniphile
ICETA neSAWIC bavumelane ngezinto eziningi ezifaka phakathi ukubhalwa kohlu lwalabo abasebenza bengabhalisile nokuqonda ukuthi yimaphi amakhono abawathole ngesipiliyoni ukuze babhaliswe njengabantu abawaziyo lowo msebenzi. Okunye okuvunyelwane ngakho ukwenziwa kwemifelandawonye yalabo abanezitifiketi ukuze bakwazi ukufakela imisebenzi ekhishwe uHulumeni. Kanti le mifelalandawonye ingakwazi nokuthi ifakele imisebenzi ekhishwe yizinkampani zangasese. Le mifelandawonye ngeke yakhiwe bese izibonela kuhle kwechwane lenyoka. Izothola ukuxhaswa ngokuthi akwazi ukuthola imisebenzi nokuthi kuxoxiswane ngezivumelwano zohwebo ukuze kuhlomule izisebenzi ezingamalungu ayo. Ukuba amalungu emifelandawonye akusho ukuthi ngeke izisebenzi zikwazi ukuzitholela imisebenzi ngazodwana.
Kulo mhlanganobuchwepheshe kuhlaluke nokuthi umzabalazo wokuthuthukisa abesifazane embonini yokwakha awududulwa yiSAWIC neCETA kuphela. Kumhlanganobuchwepheshe kuvele nokuthi iCouncil for the Built Environment ikhathazekile ngesibalo sabesifazane emazingeni ahlukene embonini yokwakha. NgokweSikhulu Esiphezulu salo mkhandlu, uNkk uPriscilla Mdlalose, abesifazane ababhalise kulo mkhandlu bangamaphesenti angama-27 kuphela. ICouncil for the Built Environment imele amakomiti okuqaphela ukulingana ngokubulili nokuthuthukiswa kwabesifazane. Inhloso yala makomiti ukuqapha ukuthuthukiswa kwabesifazane kwezomnotho. Lokhu kuzokwenziwa ngokuhlola izikhala okungenzeka zibe khona kunqubomgomo yokuthuthukiswa kwabesifazane. La makomiti aphinde aqaphe ukubhaliswa kwabesifazane njengamaphrofeshinali embomini yokwakha. Aphinde aqaphe ukuthi kuyenziwa yini ukuthi okungenani okumayelana nesibophezelo sikaHulumeni sokuthi okungenani imisebenzi kaHulumeni engamaphesenti engama-30 inikwe abantu besifazane.
Ukwakhiwa kwamaxhama akuzuphelela nje phakathi kweCETA neSAWIC kepha neCouncil on the Built Environment ibe nesivumelwano sokusebenzisana neCETA. Lesi sivumelwano simayelana nokusebenzisana ukuthuthukisa amakhono abesifazane embonini ukuze bande embonini babe nempumelelo. Enye inhloso yalesi sivumelwano sokusebenzisana ukuthuthukiswa kwamakhono ezindaweni zasemakhaya.
nguSabelo Wasa Aug 28, 2020